ပြင်သစ်တွင် Microsoft မှဦးဝင်းကို 10 Pro ကို 64bit OEM ဗားရှင်း
အင်တာနက်အားဖြင့်●ပြင်သစ်ဗားရှင်း installation နဲ့ activation, အွန်လိုင်းအရာရှိတဦးကမွမ်းမံထောက်ခံပါတယ်။
ပါဝင်သည်●ရီးရဲလ် OEM ထုတ်ဝေအာမခံချက်, 64bits စနစ်ဖြင့်သဟဇာတ, အပြည့်အဝ function ကို
●ပြင်သစ်စသည်တို့ကို, စင်္ကာပူမှာလုပ်အိုင်ယာလန်လုပ် USA တွင်ထားလုံခြုံရေးအဖုံး, ရှိပါတယ်
Edition ကို: ပြင်သစ် OEM
ခဲအချိန်: 24 နာရီ
10 သငျသညျအစာရှောငျစတင်များနှင့်အမှုတို့ကိုပြုတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးသည် 1.Windows
သင်သည်သင်၏ Windows ထုတ်ကုန်သော့ဖွင့်ဖို့အမြန်ဆုံး, လုံခြုံမှုအရှိဆုံးလမ်းပေးသည် 2.Windows ဟဲလိုစကားဝှက်-အခမဲ့ sign-in ဖြစ်ပါတယ်
10 ပြည့်စုံကာကွယ်မှုကယ်တင်တတ်၏ 3.Windows - antivirus ကို, firewall က, အင်တာနက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်
bitlocker data တွေကိုစာဝှက်စနစ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကူအညီနဲ့သင့်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်
ဝေးလံခေါင်သီ desktop ကိုသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာကနေဝငျရောကျဖို့ခွင့်ပြုနေစဉ်အတွင်း 4.Hyper-v လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသင်က virtual စက်တွေဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်
ခေါင်းစဉ်: Windows 10 ကို Pro ကို USB မှတ် Full Version 64Bit အင်္ဂလိပ်-အင်တာနေရှင်နယ်
Key ကိုစကား: ပြတင်းပေါက် 10 operating system ကို; 10 လိုလားသူအပြည့်အဝဗားရှင်းအနိုင်ရ
Windows 10 ကို Pro ကို Operating System ကို: Remote log-in တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်နှင့်မျိုးစုံကို virtual desktops တွေနဲ့ run ဖို့စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့သင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ Draw သို့မဟုတ်ဝဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရေးနှင့်စိတ်ကြိုက်မှတ်စုအဖြစ်သူတို့ကိုမျှဝေပါ။ ဒါကြောင့်အနားယူရန်အချိန်မယ့်အခါ, သင်သည်သင်၏ Windows 10 ကို PC မှာ, လက်ပ်တော့, ဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက် Xbox One မှာ content တွေကိုစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။
သစ်ကို Microsoft က Edge ကို web browser မှာမှတ်စုများကို ယူ.
, မီးမောင်းထိုးပြ Draw, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး touchscreen ကတစ်ခုသို့မဟုတ် mouse ကိုမှတဆင့်ဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ရေးဖို့, ထို့နောက်အခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့မှတ်စုမျှဝေပါ။
Start မီနူး Customize
သင့်ရဲ့ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးသို့မဟုတ်မကြာသေးမီကဆက်ပြောသည် apps များ, တိကျတဲ့ဖိုင်တွဲများ, ဒါမှမဟုတ် system setting များကိုပြသရန်ရွေးချယ်ပါ။
တဦးတည်းကို PC ပေါ်မှာမျိုးစုံလည်ပတ်မှုစနစ်များကို Run
တစ်ချိန်တည်းမှာတဦးတည်း operating system ကိုထက်ပို run ဖို့က Hyper-V ကိုအတူကို virtual စက်တွေကိုဖန်တီးပါ။ (က Hyper-V ကို SLAT စွမ်းရည်များနှင့်အပိုဆောင်း 2GB RAM ကိုနှင့်အတူ 64-bit နဲ့ system ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ )
Remote Desktop နှင့်အတူအဝေးမှအတွက် Log
ရုံးမှာ, အိမ်မှာက Windows 10 Pro ကိုသို့ Log, ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားနေစဉ်။ (အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက်လိုအပ်; ISP ကအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ )
သင့်ရဲ့လက်ဗွေရာ, မျက်နှာ, ဒါမှမဟုတ်မျက်ဝန်းကို အသုံးပြု. သင့်ရဲ့ device မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိ
Windows ကိုမင်္ဂလာပါနှင့်အတူ Windows 10 ကို devices တွေကို Select လုပ်ပြီး password တစ်ခုဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲသော့ဖွင့်, သင့်ရှိနေခြင်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါလိမ့်မယ်။ (လက်ဗွေရာစာဖတ်သူကို, ဒါမှမဟုတ်မှာ IR သို့မဟုတ် biometric အာရုံခံလိုအပ်သည်။ )
screens သင့်ရဲ့ device များ fit လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတိမ်းညွတ်လွယ်ကူသောအညွှန်းဘို့ခွင့်ပြုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ် display ကိုမှစကေး apps ။
Windows 10 ကို Pro ကိုကွန်ယက်ကိုဖိုင်များ, ဆာဗာများ, ပရင်တာများနှင့်ထို့ထက် ပို. ဝင်ရောက်ဖို့သင့်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကျောင်းဒိုမိန်းချိတ်ဆက်ပြီး။
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင် Xbox One တွင်ဂိမ်း Play
သင့် Xbox One ဂိမ်းတစ်ခုက Windows 10 ကို PC, laptop ကို, ဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက် stream ။ Windows 10 ကိုများအတွက် optimized ဂိမ်း, ဒါမှမဟုတ်စံချိန် Play နှင့် built-in ဂိမ်း DVR နှင့်အတူဂိမ်းကစားအချိန်လေးမျှဝေပါ။ (Broadband အင်တာနက်ကလိုအပ်။ )
မျက်နှာပြင်မှလေးခု apps များအထိ SNAP, သို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နေရာပိုရဖို့ကို virtual desktops တွေနဲ့ဖန်တီးပါ။
သင်၏ Windows 10 devices တွေကိုဖြတ်ပြီး Cortana ကိုကူညီပေးနေ, သတိပေးချက်များ setting အီးမေးလ်များရေးသားဖို့ကူညီပေးနေ, ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူချတ် hosting ။ (Cortana အတွေ့အကြုံကိုဒေသနှင့် device ကိုအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်။ )
ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန် Windows 10 ကို Pro ကိုကမ်းလှမ်းမှုကို Windows Update ကိုအတူ bitlocker နည်းပညာ, နဲ့ automatic updates များကိုအတူ encryption ကို။ (bitlocker ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပလက်ဖောင်း Module 1.2 သို့မဟုတ် 2.0, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးက USB flash drive ကိုလိုအပ်သည်။ )
အဆင်ပြေ access ကို applications များ
Windows 10 ကို Pro ကိုသင်လျင်မြန်စွာ applications များဝင်ရောက်ဖို့ကို Windows Store မှာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် app ကိုအပိုင်းဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ (ရိုက်ယူခဲ့သည်နိုင် applications များအရေအတွက်လျှောက်လွှာအဘို့အနိမ့်ဆုံး resolution ကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ )
ယခင်: မိုက်ကရိုဆော့ဖဝင်း english FQC08929 10 Pro ကို 64bit OEM ဗားရှင်း
နောက်တစ်ခု: မိုက်ကရိုဆော့ဖဝင်း Serial Key ကိုအွန်လိုင်း Activation နှင့်အတူပြင်သစ် 10 Pro ကို 64bit OEM ဗားရှင်း
သငျသညျ Windows 10 ကို Professional ကဒေါင်းလုပ်လုပ်မီ, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအောက်ပါလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရပါမည်:
Processor ကို: 1 gigahertz (GHz အမြန်နှုန်း) သို့မဟုတ်ပိုမြန်။
RAM ကို: 1 gigabyte (GB အထိ) (32-bit) သို့မဟုတ်2GB ကို (64-bit)
အခမဲ့ hard disk space ကို: 16 GB အထိ။
graphics card: WDDM driver ကိုနှင့်အတူ Microsoft က DirectX9ကိုဂရပ်ဖစ် device ကို။